Akụrụngwa njikwa ihe ọmụma | Motadata
Njikwa Ọmụma ServiceOps
Melite arụmọrụ onye ọrụ
Nye mkpebi ngwa ngwa maka okwu na ngwanrọ njikwa ihe ọmụma jikọtara ITIL.
Jiri anyị kwalite ọrụ onwe yana nye ndị ọrụ ike Ngwanrọ Ọmụma
Njikwa Ọmụma Motadata ServiceOps ITIL nwere ike inyere nzukọ gị aka ịchịkọta ihe ọmụma, bawanye ohere, kwalite nhazi usoro, ma wepụ ihe mgbapụta.
Jiri ngwa ngwa soro usoro mkpebi gị Ihe ọmụma
Mepụta ma kesaa akụkọ ihe ọmụma iji nye ndị otu gị na ndị ọrụ gị ihe ngwọta, mgbagha, FAQs, wdg.
Onye nchịkọta akụkọ WYSIWYG ọgbara ọhụrụ
Nweta dabere na ọrụ
Isiokwu ndị nwere ike ịhazi iji hazie ọdịnaya yiri nke ahụ
Akwụ ụgwọ arụmọrụ
Nyere ndị ọrụ aka nyere onwe ha aka Portal onwe-Portal
Jiri otu ozi etiti na-enye mmata maka idozi nsogbu ndị mere na mbụ.
Ọchọ ihe ederede
Atụ aro edemede smart nke AI kwadoro
Enwekwu afọ ojuju ndị ahịa
Ịrụ ọrụ arụ ọrụ emelitere
Bulite arụmọrụ ọkachamara site n'ịkwalite Njikọ Aka
Mee ka mmekorita dị n'etiti ndị ode akwụkwọ bụrụ ikuku mgbe ị na-eke akụkọ ma ọ bụ na-edekọ azịza maka okwu amaara site na iji ngalaba.
Ọdịnaya nke ọkwa dị ka Draft
Ọkachamara arụpụta ọrụ emelitere
Ọrụ na-agbanwe agbanwe
Nye ndị ọrụ ume ka ha chọta azịza nye nsogbu ndị a na-ahụkarị site n'onwe ha wee wedata ọnụ ọgụgụ nke tiketi mbata site na iji ngwanrọ Ọmụma anyị.
Usoro nnabata ọtụtụ ọkwa
Mepụta nkwado tupu ibipụta akwụkwọ ọhụrụ ọ bụla ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla site na iji usoro ọrụ nkwado.
Ihe omume ejikọrọ na Ọmụma
Jikọọ ọdịnaya ihe ọmụma na tebụl ọrụ na tiketi akụrụngwa.
Jikwaa ohere ịnweta akụkọ ihe ọmụma na otu dị iche iche site n'ime ka ọhaneze, nzuzo, ma ọ bụ amachibidoro.
Ebe ihe ọmụma bụ ebe nchekwa ozi onwe onye n'ịntanetị maka otu ngwaahịa, isiokwu ma ọ bụ ọrụ. Ewubere omume njikwa ihe ọmụma gị na ntọala ọmụma. Njikwa ihe ọmụma na-enyere gị aka ịmepụta, ịhazi, kesaa, jiri, na jikwaa ihe ọmụma n'ime nzukọ gị niile.
Onye ọ bụla na-enye aka nwere ahụmahụ na mpaghara ndị dị mkpa nwere ike ịgbakwunye ma kwalite ntọala ihe ọmụma. Ajụjụ, akwụkwọ ntuziaka, runbooks, ntuziaka nchọpụta nsogbu, ma ọ bụ ozi ọ bụla ọzọ ndị otu gị nwere ike chọọ ma ọ bụ chọọ ịma nwere ike ịgụnye na ntọala ihe ọmụma.
Kedu ihe bụ usoro maka njikwa ihe ọmụma?
Iji wepụta ihe ọmụma sitere na mmemme kwa ụbọchị ma jikwaa ihe ọmụma ewepụtara, ndị otu desktọpụ ọrụ na-eji usoro data, ozi, ihe ọmụma na amamihe (DIKW) maka njikwa ihe ọmụma. Usoro a na-egosiputa njem nke ka esi agbanwe data ka ọ bụrụ ozi, ihe ọmụma, na n'ikpeazụ, amamihe.
Na nzọụkwụ mbụ - data, a na-anakọta eziokwu dị nro banyere ihe ndị na-eme na nzukọ ahụ. Na nzọụkwụ ọzọ - ozi, a na-enye ihe ndị gbara ya gburugburu na data anakọtara. Nzọụkwụ na-esonụ - ihe ọmụma, gụnyere ịchịkọta ahụmịhe, ihe ọmụma, na ikpe nke ndị njikwa ihe ọmụma, ndị ọrụ nka, SMEs, ma ọ bụ ọbụna ndị ọrụ njedebe. N'ikpeazụ, data, ozi, na ihe ọmụma na-agbakọta ọnụ iji mepụta amamihe nke na-eme ka njikwa ihe ọmụma dịkwuo mma. A na-eji atụmatụ dị egwu, mkpebi okwu, na atụmatụ atụmatụ eme ihe maka ime mkpebi ka mma.
Kedu ụfọdụ omume kacha mma maka njikwa ihe ọmụma?
Omume kachasị mma maka njikwa ihe ọmụma gụnyere ịghọta nsogbu na nsogbu ndị dị n'okpuru tupu ịmalite ma ọ bụ mejuputa mmemme njikwa ihe ọmụma. Ozugbo usoro ahụ dị, ekwesịrị ịme ihe ọmụma ka ọ bụrụ ihe na-eri nri ma gosipụta ya n'ụzọ enyi na enyi nwere usoro na-agbanwe agbanwe, ahaziri ahazi iji mee ka ọ dị mfe ịchọta azịza maka ndị ọrụ.
Ịle ịdị irè nke mmemme njikwa ihe ọmụma nwere ike bụrụ ihe ịma aka ebe ọ bụ na a na-eme atụmatụ, rụọ ọrụ, wee nyochaa ya site na iji ntụaka nke ụlọ ọrụ mepụtara n'ime ya. Yabụ enwere ike iji ọtụtụ KPI ọzọ na ntụnyere aka kama. N'ikpeazụ, achọrọ ka ịmepụta usoro ndị dị mkpa iji mee ka ndị ọrụ nwee ike ọ bụghị nanị ịmepụta na ịnweta ihe ọmụma kamakwa iji ya na-eme ihe kwa ụbọchị.
Gịnị kpatara njikwa ihe ọmụma ji dị mkpa?
Usoro njikwa ihe ọmụma dị oké mkpa na ụlọ ọrụ IT ọ bụla n'ihi na ọ na-enyere ya aka inweta ihe ọmụma dị mkpa ka oge na-aga ka ọ na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke ihe onwunwe ejiri na-achọpụtaghachi ihe ọmụma.
Njikwa ihe ọmụma na-ekwe nkwa na ndị ọrụ IT niile na-enweta ozi ma na-akwalite usoro katalọgụ ọrụ enyemaka onwe onye, ​​nke na-azọpụta oge na ego.
Usoro njikwa ihe ọmụma dị irè na-eme ka ihe ọmụma dị n'otu, na-akwalite ịga n'ihu azụmahịa, ma kpochapụ silos ihe ọmụma. Ọ na-akwado ime mkpebi ka mma na ọkwa niile ma na-enweta uru n'ezie site na data ejikọtara site na nhazi DIKW. Ọzọkwa, ọ na-ebelatakwa ụgwọ nke ọzụzụ maka ndị na-ahụ maka ọrụ ọhụrụ.